Ngiphoxekile ngokuthi silahle amaphuzu: umqeqeshi weBucs - Impempe
Ngiphoxekile ngokuthi silahle amaphuzu: umqeqeshi weBucs
U-Erick Mathoho weKaizer Chiefs ebanga ibhola noVincent Pule benoThulani Hlatshwayo be-Orlando Pirates
Ukholwa wukuthi badedele igoli elilula kakhulu umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJozef Zinnbauer, iqembu lakhe eliqunjwe phansi yiKaizer Chiefs ngo 1-0 emdlalweni womkhaya weDStv Premiership, eFNB Stadium, ngeSonto ntambama.
Igoli elishaywe uSamir Nurkovic yilona eliqinisekise ukuthi Amakhosi abuya namaphuzu amathathu kulo mdlalo obubhekwe ngabomvu phakathi kwalezi zimbangi ezindala. Akhala ngakho uZinnbauer ukuthi bamyekile uNurkovic bangamaka abadlali phakathi ebhokisini, waze washaya igoli.
“Kube lula kakhulu (ukudedela igoli). Umthetho umile ukuthi akumele uvumele umgadli athinte ibhola ebhokisini. Asivimbanga kahle nomake kube khona ukungaxhumani kubadlali bami. Mhlawumbe omunye umdlali ubezitshela ukuthi kuzovimba omunye kanti nomunye ucabanga kanjalo,” kusho uZinnbauer.
Uvumile ukuthi ukushaywa ngeSonto kubalimaze kakhulu njengoba iSundowns ilokhu ivula igebe esicongweni kanti vele isasalele emuva ngemidlalo, ngenxa yokubuye ibambeke emidlalweni yeCAF Champions League.
“Bengingagxilile kwiSundowns kodwa bengifuna sithole amaphuzu amathathu namuhla. Bekuyithuba elihle kakhulu kithina ukuthi sinyukele endaweni yesibili kodwa salilahla. Besifuna ukuwina lo mdlalo womkhaya ka-100. Kodwa njengamanje into ebalulekile ukuthi sinemidlalo eyisishiyaglolunye okumele siyidlale. Kumele silwele amaphuzu, yilokho okubalulekile kimina hhayi ukunaka iSundowns. Bekungaba kuhle ukuthi siye ekhefini sihleli endaweni yesibili,” kusho uZinnabauer.
Imidlalo yePremiership izothi ukuma kancane njengoba kuzodlalwa imidlalo yamazwe esekhalendeni leFifa. UZinnbauer uzothola ithuba lokulungisa kahle amaphutha eqenjini lakhe njengoba kuzothatha amasonto amabili ngaphambi kokuthi kubuye imidlalo.
“Ngiphoxekile ngokuthi asiwatholanga amaphuzu namuhla. Bekuyithuba elihle kakhulu lokwenza lokho kodwa sahluleka. Ngiphoxekile impela,” kuphetha uZinnbauer.
Previous Previous post: Iyeke amathuba, yalahla amaphuzu iSundowns ibanjwa yiLeopards
Next Next post: UHunt uthi akayi ndawo uBilliat